Ahoana ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa e-Varotra | Martech Zone
Ny mpanjifa no fototry ny orinasa. Marina izany ho an'ny orinasa misy ny zoro, ny domains ary ny fomba rehetra. Ny mpanjifa dia manan-danja amin'ny dingana rehetra amin'ny sehatry ny orinasanao. Ny tanjon'ny orinasa, ny paikady ary ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing an'ny marika malaza dia voatenona manodidina ny filan'ny mpanjifa sy ny mpihaino kendrena.
Mpanjifa sy tontolo iainana eCommerce
Amin'ny vanim-potoana atosiky ny nomerika, ny haitao finday, ary ny fifaninanana masiaka, tsy azonao atao ny tsy mijery ny lanjan'ny mpanjifa. Maherin'ny 5 amin'ireo mpifaninana aminao no manolotra vokatra sy serivisy toa anao amin'ny mpanjifa mitovy amin'ny fotoana rehetra. Ny vokatra atolotrao dia tokony ho tokana sy ho tombontsoan'ny mpampiasa anao, hialana amin'ny tsy fahombiazan'ny varotra.
Ny singa mitondra fiara lehibe eto dia ny traikefan'ny mpanjifanao amin'ny vokatrao sy ny serivisy ho an'ny mpanjifanao. Arakaraka ny tsaratsara kokoa ny traikefa, ny vintana bebe kokoa anananao amin'ny varotra.
Ny 70% n'ny traikefa tamin'ny fividianana dia mifototra amin'ny fahatsapan'ny mpanjifa azy ireo.
Neosperience, Fifandraisan'ny mpanjifa: Stats 10 sy zava-misy hanatsarana ny paikadinao
Ny orinasan'ny mpahita dia mino mafy fa raha manome traikefa ho an'ny mpanjifa tsaratsara kokoa izy ireo dia ho afaka hihoatra ny fifaninanana ary hametraka fahatokisana amin'ireo mpanjifa ary; amin'ny farany, mahazoa mpanjifa betsaka am-bava.
Amin'ny filozofika, ny eCommerce dia a tsy hanahirana ho an'ny mpanjifa. Tian'izy ireo ny miantsena an-tserasera satria mety, mora vidy ary feno safidy. Ny fivoarana eo amin'ny sehatry ny fiarovana angon-drakitra dia ahafahana manana fomba fandoavam-bola azo antoka sy azo antoka, nefa manakana ny mety hisian'ny hosoka amin'ny Internet mifandraika amin'ny fiantsenana an-tserasera. Izany dia nitarika fiakarana an-tampon'ny varotra sy fidiram-bola eCommerce.
Ny varotra eCommerce dia mety hahatratra ny marika $ 4.3 trillion amin'ny faran'ny 2021.
Shopify, The Global Ecommerce Playbook
Mba hahatongavana any, ny eCommerce dia tsy maintsy manamafy ny fehin-kibony ary manomboka amin'ny dia fanatsarana - manolotra a traikefa ho an'ny mpanjifa ambony. Ny traikefan'ny mpanjifanao dia tokony hampitombo ny haavon'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa mba hanampiana ny fitomboan'ny vola miditra.
80% n'ny mpampiasa no tsy hifanakalo varotra amina orinasa iray satria tsy dia misy traikefa amin'ny mpanjifa.
HubSpot, Ny marina sarotra momba ny vidin'ny fakana (sy ny fomba ahafahan'ny mpanjifanao mamonjy anao)
Ity lahatsoratra ity dia milaza ny sasany amin'ireo fomba fanao tsara indrindra izay manampy amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifanao amin'ny orinasanao eCommerce.
Mamolavola traikefa ananan'ny mpampiasa
Avy amin'ny pejin-tranonkala / pejy fampiharana mankany amin'ny pejin'ny vokatra ary manomboka amin'ny sarety mankany amin'ny pejy fizahana, ny zavatra niainan'ny mpampiasa ao amin'ny tranonkalanao dia tokony tsy hisy kilema. Tokony ho afaka manao izay tiany atao ny mpanjifanao.
Na dia manandrana manafoana ny sarety aza izy ireo, ny fizotrany sy ny fivezivezena dia tokony hohamboarina tsara sy faritana mazava tsara mba tsy ho hafangaro amin'ny fampiasana ny tranonkalanao. Tokony hamolavola ny tranokalanao na ny rindranasao amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa. Tokony ho mora amin'ny mpampiasa Internet izany, tsy ho anao irery ihany.
Tokony hisy bokotra fikarohana hanampiana ny mpanjifa hahita ny vokatra tadiaviny. Sokajy, lohatenin'ny pejy, teny lakilen'ny vokatra, tag, sarin'ny vokatra, ary antsipiriany hafa - ny zava-drehetra dia tokony hasiana tombo-kase hahasoa ny mpampiasa. Saintsaino ny fametrahana fanitarana ny fikarohana eCommerce hahafahan'ny endri-pikarohana haingana sy mora amin'ny tranokalanao.
Manolora fomba fandoavam-bola azo antoka
Ny fomba fandoavam-bola amin'ny fivarotana eCommerce dia tokony ho azo antoka, azo antoka ary tsy misy korontana. Mandritra ny fiantsenana an-tserasera, ny mpanjifa dia te hahafantatra ny antontam-bolany manokana sy ara-bola azo antoka.
Manampia fomba fandoavam-bola araka izay azo atao ao amin'ny magazinao. Ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit / debit, transfer transfer, cash on delivery (COD), PayPal, ary e-Wallets dia fomba fandoavam-bola malaza ankehitriny. Ianao dia mila maka antoka fa mamela ny mpanjifanao mandoa amin'ny alàlan'ireo safidy fandoavam-bola ireo ny vavahadinao.
Ny tena zava-dehibe dia mila manome toky ireo mpitsidika sy mpanjifa amin'ny pejy ianao fa azo antoka sy azo antoka ny safidinao fandoavam-bola. Mampiasà vola amin'ny fahazoana mari-pankasitrahana marobe ho an'ity ary apetraho ao amin'ny tranokalanao / fampiharana ireo mari-pamantarana ireo ho toy ny tondro fitokisana hanomezana toky ny mpanjifanao fa azo antoka miaraka aminao ny data-dry zareo.
Ampiasao amin'ny vavahady fandoavam-bola izay misy fepetra fiarovana marobe. Ny fampidirana angon-drakitra omen'ny mpanjifa dia hiantoka ny fandriam-pahalemana. Ny fampiasana vavahady fandoavam-bola dia manamafy ny angona mpanjifanao sy ny orinasa, ary mampihena ny hamafin'ny fampitahorana amin'ny hosoka amin'ny Internet.
Mamorona fizahana fizahana madiodio
Matetika, ny antony ao ambadiky ny sarety nilaozana dia fizahana sarotra dingana. Ny fizotry ny fizahana amin'ny tranokalanao na ny app anao dia tokony ho fohy, tsotra ary haingana. Ankoatr'izay, ny mpampiasa dia tokony ho afaka mahita ny sariny miantsena isaky ny pejy mba hahafantarany ny fomba famitana ny filaminana.
Ny indostrian'ny ecommerce dia mamoy dolara tsy tambo isaina isan-taona noho ny sarety nafoina na ny fandoavam-bola voamarina mandritra ny fizahana. Azonao atao ny manamboatra automatique handrefesana ny fironana ao ambadiky ny kalesy fiantsenana ariana mba hanatsarana ireo lesoka misy amin'ny fizotry ny fizaham-bola.
Mandritra ny fizahana dia tokony ho hitan'ny mpanjifa ny sandan'ny saretiny sy ny sarany fandefasana azy. Tokony hampiseho fampahalalana momba ny tolotra sy tapakila fihenam-bidy mihatra amin'ny mpampiasa ihany koa ny pejy.
Ny mpanjifa dia miahiahy foana amin'ny fandefasana ny baikony. Miantso izy ireo hanamarina ny satan'ny fandefasana azy ireo.
Ny fametrahana efitrano fandefasana mandroso dia hanampy ny orinasanao eCommerce hifandray amin'ireo mpitatitra marobe ary hahafahanao mamorona lalàna mifehy ny fandefasana entana - isaky ny baiko isan-karazany, toerana misy ny mpanjifa ary anton-javatra lehibe hafa - amin'ny alàlan'ny tabilao tokana.
Raha ny orinasanao dia manatitra na loharano avy any ivelany, dia ilaina ny manana ny fandefasana entana / fanondranana entana. Manampy anao amin'ny famoronana traikefa tsara kokoa ho an'ny mpampiasa anao izany rehetra izany raha ny momba ny fandefasana sy ny fandefasana entana.
Farany, ny fivarotana eCommerce dia tokony hiantohana ny fidinan'ny zero ary tsy hisy fihenam-bidy mandritra ny fizotran'ny fizahana mba hisorohana ny tranga fandaozana ny sarety farany.
Alefaso ny serivisy ho an'ny mpanjifa ambony
Mba hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifa avo kokoa ianao. Tokony ho tafiditra ao anatin'izany ny serivisy alohan'ny varotra sy ny varotra aorian'ny varotra.
Manangana ekipa olona malala-tanana hahita ny latabatra fanohanan'ny mpanjifanao. Omeo hery izy ireo amin'ny alàlan'ny fitaovana CRM alefa AI - tsy maintsy misy efitrano ho an'ny orinasa eCommerce maoderina - hahafahan'izy ireo mizaha ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny olany.
Alao an-tsaina ny andro iray be atao sy ny filaharana lava an'ny mpanjifa miandry ny anjarany hiresaka amin'ny maso ivoho mpanjifanao!
Ny fananana chatbot azo ampitaina AI dia mamonjy ny fotoan'ny agents, ankoatran'ny, mamela azy ireo hifantoka amin'ny hetsika fototra hafa amin'ny fizotran'ny fanohanan'ny mpanjifanao. Chatbots dia afaka miatrika antso / resaka marobe ary mamaha haingana ireo olana mahazatra toy ny fanamafisana ny baiko, fanafoanana, fanoloana, famerenam-bola, antsipirian'ny fandefasana sns.
Fikarohana sy fanatsarana / Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy
Amin'ny alàlan'ny fomba mahomby amin'ny fanatsarana sy ny marketing ny motera fikarohana dia azonao atao ny manampy ny mpihaino kendrenao hahita izay tadiavin'izy ireo amin'ny motera fikarohana, toa ny Google sy Bing. Raha tsy vonona SEO ny backend eCommerce anao dia azonao atao ny mampiasa extension SEO eCommerce tsara kalitao ary mampihatra paikady SEO andrana sy marina mba hiseho amin'ny valin'ny fikarohana ambony indrindra amin'ny motera fikarohana.
Ny orinasanao eCommerce dia afaka mampiasa media sosialy amin'ny fomba maro:
To mampirisika ny vokatrao, ny serivisinao, ny kolontsain'ny orinasa ary ny tolotra omenao;
To mifandray miaraka amin'ny mpihaino anao sy ny mpanjifanao;
To mihaino ho an'ireo mpanjifanao tsy afa-po ary hamaha ny olany amin'ny vavahadim-panjakana; ary
To hanambara ny marika (s).
Mila mampiasa tambajotra sosialy mahomby indrindra ho an'ny orinasanao ianao, mahita sy mifandray amin'ny mpihaino / mpanjifanao. Ho an'ny mahamety ny mpanjifanao, azonao atao ny manampy ny pejy fandinihana, ahafahanao maneho hevitra sy mandefa rindrina ho an'ny mpanjifa, ary mamorona fivarotana sy mivarotra amin'ny tambajotra sosialy.
Ankoatry ny fanoloran-tsakafo, tontolo iainana azo antoka ary mangarahara, azonao atao ny manome tolo-kevitra manokana ho an'ireo mpitsidika anao sy ny mpanjifa misy anao hanatsara ny traikefa. Ho an'ity dia mila miasa miaraka amin'ny fitaovana AI sy ML ianao izay afaka mianatra avy amin'ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny Internet ary manampy anao hanome ny vokatra mety amin'ny mpanjifa mety. Toy ny manolotra / manolotra zavatra mety tadiavin'ny mpampiasa izany.
Fantaro ny zava-drehetra, mba hahafahanao manao na inona na inona: Ahoana no hanakorontanan'ny 6sense ny indostria ABM